जडीबुटी « Image Khabar
बहुमूल्य केशर खेतीमा इलामका कृषक आकर्षित, प्रतिकिलो १० लाख रुपैयाँ
इलाम, कात्तिक १७ । इलाममा केशर खेतीप्रति कृषकहरु आकर्षित हुँदै गएका छन् । प्रतिकिलो १० लाख रुपैयाँ पर्ने उच्च मूल्यको जडीबुटी केशर उत्पादन हुन थालेपछि कृषक उत्साहित भएका हुन् ।
गुर्जोले शरीरमा के गर्छ ? कसरी खाने ? कति खाने ? यसो भन्छन् चिकित्सक
काठमाडौं, असोज २८ । कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोपका लागि अहिले विश्वभर वैज्ञानिकहरु सक्रिय छन् । केही परीक्षणहरु सफलताउन्मुख पनि छन् । संक्रमणसँग जुध्न रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास महत्वपूर्ण देखिएको छ । रोगप्रतिरोधात्मक
नेपालकै बन जंगलमा पाइने यी हुन् यौन शक्तिबर्द्धक जडीबुटी
काठमाडौं । रोग प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गर्ने तथा यौन शक्तिबर्द्धक औषधिहरु नेपालका बन जंगलमा प्रशस्त पाइन्छन् । आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले सम्पूर्ण पत्रिकामा नेपालमा प्रयोग गरिने यौनशक्तिवद्र्धक केही
अदुवाले कोरोना रोक्न मद्दत गर्छ ?
काठमाडौं, असोज १९ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण दिन-प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या पनि दैनिकरुपमा बढिरहेको छ । कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त छ । तीन करोड ५४ लाखभन्दा बढी
जडीबुटीको विषयमा दुई गाउँका स्थानीयबीच झडप
सिमकोट, भदौ २५ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५, दुर्पा गाउँ र खर्पेल गाउँबासीबीच वनको जडीबुटी विषयमा बुधबार र बिहीबार झडप भएको छ । दुर्पा गाउँबासीले भोगचलन गर्दै आएको मालिकादेवी सामुदायिक वन
एक महिनाभित्र काठमाडौंमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने चेतावनी
काठमाडौं, भदौ १९ । कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसके एक महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाको स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-१९
‘कोरोना संक्रमणमा आयुर्वेदिक उपचार प्रभावकारी’
नरेन्द्र मानन्धर र सुन्दर गुरुङ (इमेज) काठमाडौं, भदौ १ । केही देशले कोरोनाविरुद्धको खोप निर्माण गरेको दाबी गरेपनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको छैन । कोरोनाको खोप विकास नै भएपनि तत्काल